Verónica Roth: akwụkwọ | Akwụkwọ ugbu a
Veronica Roth: akwụkwọ
Encarni Arcoya | 26/09/2021 20:25 | Emelitere ka 26/09/2021 20:34 | Ndị edemede
Nye ndị na -amasị akwụkwọ ntorobịa na akwụkwọ dystopian, nke ha na -egosi ọdịnihu nke ọha, klaasị, wdg. ijide n'aka aha Veronica Roth na akwụkwọ ya ọ mara ha nke ọma.
Mana onye bụ Veronica Roth? Kedu akwụkwọ ndị ị dere? Ọ bụrụ na ịmaghị ya, ma ọ bụ na ntụle, ọ bụrụ na ị mara akwụkwọ ya ama ama, mgbe ahụ anyị ga -agwa gị gbasara ndị niile o dere na akụkọ ndụ ya.
1 Ọnye na -bụ Veronica Roth?
2 Akwụkwọ Veronica Roth
2.1 Trilogy dị iche iche
2.2 Akụkọ dị mkpirikpi metụtara Divergent
2.3 Akara Ọnwụ Duology
2.4 Ọgwụgwụ na mmalite ndị ọzọ: akụkọ sitere na ọdịnihu
2.5 Duology A họpụtara anyị
2.6 Gee ntị
Ọnye na -bụ Veronica Roth?
Isi: blọgụ dị iche
Veronica Roth ghọrọ onye ama maka trilogy. Kpọmkwem, Divergent. Nke a bụ ihe ịga nke ọma na n'ime obere oge ha mere ya ka ọ bụrụ ihe nkiri, nke ahụ mekwuru ka ọrụ onye edemede America a mụrụ na 1988. N'ezie, ọ bụ nna German, Edgar Roth, na nne America, Bárbara mụrụ ya. Rydz (onye nwekwara agbụrụ Polish).
Su ndụ gafere afọ mbụ na New York, mana mgbe nne na nna ya gbara alụkwaghịm, nne ya lụkwara ọzọ, o biri na Illinois, na Barrington.
Ebe ọ bụ na ọ dị obere, ọ na -enwe mmasị ide ihe, yana ịgụkwa akwụkwọ. Ezinaụlọ ya bụụrụ ya nnukwu nkwado kemgbe, n'ịchọpụta na o nwere nka ide ihe, ha gbara ya ume iduzi mbọ ya ka ọ dị mma ma nweta ọzụzụ na ya. N'ihi ya, o debanyere aha na Mahadum Northwwest ebe ọ gụrụ "Creative Writing."
O nwere asambodo na ọrụ ahụ ma bụrụkwa onye na -akpalite ide akwụkwọ mbụ ya. Na mbụ, ọ bụ naanị ihe edepụtara, ebe o weghaara ihe ọ na -amụta na ọrụ ya mgbe ọ na -eji ya dịka ihe nchekwa iji zuru ike n'ọrụ ọrụ kọleji. Aha akwụkwọ ahụ? Ọdịiche. N'ezie, Veronica Roth kwuru na oge mbụ ọ batara na akụkọ a bụ mgbe ọ na -aga Minnesota, na mahadum.
N'ụzọ doro anya, ọ bipụtara ya, nke a bụ ihe ịga nke ọma na na 2011 a matara ya na mba iri na ise. Ya mere, o kwupụtara na ọ bụ trilogy. Ọzọkwa 15 bụ nnukwu afọ maka onye edemede ka ọ lụrụ onye na -ese foto Nelson Fitzh.
Otu afọ ka e mesịrị, ọ nwetara ụlọ ọrụ na -emepụta ihe nkiri, Summit Entertainment ga -achọpụta akwụkwọ ahụ, ma ree nwebiisinka maka mmegharị ihe nkiri ahụ. N'otu afọ ahụ, ugbua na 2012, ọ wepụtara akụkụ nke abụọ, Insurgente.
Na 2013 ọ bụ oge Leal. Ma n'ezie ị maara na emegharịrị akwụkwọ niile ahụ, wee nweta ihe ịga nke ọma.
Banyere onyinye, enwere ihe abụọ dabara adaba. N'aka nke ọzọ, na 2011, mgbe ndị obodo Goodreads nyere ya dịka akwụkwọ ọkacha mmasị. Otu afọ ka e mesịrị, na Goodreads, o meriri nturu ugo maka akụkọ akụkọ ifo ndị ntorobịa kacha mma na akụkọ ifo.
Na agabeghị ihe dị iche iche, Verónica Roth ebipụtala akwụkwọ akụkọ ndị ọzọ, ndị a enwechaghị ihe ịga nke ọma n'ihi na anụbeghị. Agbanyeghị, anyị ga -ekwu maka ha n'okpuru.
Akwụkwọ Veronica Roth
Ebe e si nweta ya: Obodo akwụkwọ
Site na Verónica Roth, akwụkwọ ndị meriri n'ezie ma nweela mgbanwe, ha adịghị ọtụtụ. N'ezie, ọ bụ naanị atọ mbụ o wepụtara, Di iche iche, Ọgba aghara na iguzosi ike n'ihe, ha niile sitere na trilogy divergent.
Agbanyeghị, nke ahụ apụtaghị na onye edemede akwụsịla ibipụta ya, tere aka na ya. Ọrụ edemede ya malitere na 2011 ma ọ ka na -aga n'ihu na 2021. Ya mere, anyị na -agwa gị gbasara akwụkwọ ya.
Trilogy dị iche iche
Anyị na -amalite na akwụkwọ mbụ nke Verónica Roth, ndị a bụ Divergente (2011), Insurgente (2012) na Leal (2013). Ha niile kọrọ akụkọ Beatrice, nwa agbọghọ onye, ​​kama inwe nka maka otu akụkụ nke obodo ya, nwere ha niile. Nke ahụ bụkwa ihe egwu, ọbụlagodi na a ga -ama ya ikpe ọnwụ ma ọ bụrụ na ha achọpụta ihe nzuzo ya. Na -esote ya, anyị nwere Cuatro, onye ibe nke protagonist.
Ihe omumu ihe omumu a bu ihe juru n'akwukwo dystopian. N'ezie, ọ pụtara n'otu oge ahụ Egwuregwu Hunger, nke mere ka ihe ịga nke ọma ya ka ukwuu.
Akụkọ dị mkpirikpi metụtara Divergent
Mgbe emechara trilogy di iche iche, Verónica Roth gara n'ihu na -enye ndị egwu "onyinye", ihe si na nke a pụta bụ akụkọ dị mkpirikpi o mepụtara. Dị ka ọmụmaatụ, Anọ: nchịkọta akụkọ nke Divergent, nke ọ chịkọtara akụkọ mkpirikpi ise na -akọ akụkọ ndụ nke anọ, ma ọ bụ echiche ya nke isi ụfọdụ nke akụkọ mbụ. N'ezie, ọ dịghị ogologo oge, ebe ọ bụ na o nwebeghị akwụkwọ 257 (ma e jiri ya tụnyere trilogy, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụghị akwụkwọ nke a).
Aha aha akụkọ ise ndị a bụ:
Akụkọ Nwa ahụ.
Akara Ọnwụ Duology
Mgbe Verónica Roth gwụsịrị na Divergent, ọ nwara ihu ọma ya na akụkọ ọhụrụ, na nke a, akwụkwọ nsọ, ya bụ, akwụkwọ abụọ: The Marks of Death, site na 2017; na Ebe ekewara ekewa, na 2018.
Akụkọ a enwechaghị mmetụta, ebe ọ bụ na emezighị ya na sinima. Mana ha abughi akwụkwọ ikpeazụ nke onye dere ya.
Ọgwụgwụ na mmalite ndị ọzọ: akụkọ sitere na ọdịnihu
N’afọ 2019, n’ikwesị ntụkwasị obi n’eziokwu iwepụta akwụkwọ kwa afọ, onye ode akwụkwọ bipụtara Ọgwụgwụ na Mmalite ndị ọzọ: Akụkọ sitere na Ọdịnihu. Ọ bụ akwụkwọ pụrụ iche (nke mbụ ọ na -eme) na nke ahụ ọ bụ akụkọ mkpirikpi.
Duology A họpụtara anyị
N'ikpeazụ, na 2020, onye edemede maliteghachiri nkuzi okpukpe. N'afọ 2020, ọ tọhapụrụ anyị bụ ndị ahọpụtara ma a na -atụ anya na akwụkwọ na -esote ga -apụta na 2021, n'agbanyeghị na amabeghị ihe ọ bụla banyere ya.
Hearken bụ akụkọ dị mkpirikpi nke Veronica Roth jikọrọ aka na akụkọ ihe mere eme dystopian Shards & Ashes. Ihe nkata ahụ gbara gburugburu a nwa agbọghọ a na -etinye ụbụrụ ụbụrụ ma nwee ike gee egwu egwu ịnwụ anwụ n'etiti apọkalips.
Verónica Roth ebipụtabeghị ọtụtụ, mana o nwere ibe gọọmentị ya ebe ị ga -ahụ ozi ọ na -ewepụta. Maka ugbu a, akwụkwọ ọhụrụ ya bụ A họpụtara anyị, mana anyị anaghị ewepụ na enwere ọkwa banyere akụkụ nke abụọ nke usoro ọmụmụ a. Ị masịrị onye edemede? Kedu akwụkwọ ndị ị gụrụ gbasara ya?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Ndị edemede » Veronica Roth: akwụkwọ
Akwụkwọ ngosi Madrid. Ọkọ akụkọ njem
Pablo na Virginia, nke Marcel Mithois dere. Obere njikọ